बिर्सनलायक बन्यो रामकुमारीको एनिभर्सरी, भ्यालेन्टाइन के होला ? – नेपाली सूर्य
February 11, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on बिर्सनलायक बन्यो रामकुमारीको एनिभर्सरी, भ्यालेन्टाइन के होला ?
काठमाडौं । आजै आफ्नो ११औं वैवाहिक वार्षिकोत्सव मनाइरहेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री राज्यविरुद्ध कसुर गरेको आरोपमा बिहान पक्राउ परेकी छिन् । एनिभर्सरीकै दिन गम्भीर आरोपसहित प्रहरीबाट पक्राउ पर्नु उनका निम्ति दुखद संयोग हो ।
आज बिहान झाँक्रीले आफ्नो विवाहका तस्वीरहरु सेयर गर्दै श्रीमान्सँग शुभकामना साटेकी थिइन् । उनले करिब सात बजेतिर फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘आज माघ २९ । सोचेजस्तो हुन्न जीवन भन्ने थाहा छ । तिमी आयौ जिन्दगीमा यसै आहा छ । हाम्रो वैवाहिक जीवनको ११ वर्षको यात्रामा प्रिय श्रीमान्लाई हेप्पी एनिभर्सरी ।’
रामकुमारीको विवाह २०६६ साल माघ २९ गते धनकुटाका पशुपतिबाबु पुरीसँग भएको हो । पशुपति सरकारी जागिरे हुन् । करिब पाँच वर्षको प्रेमपछि उनीहरुले विवाह गरेका थिए । अहिले उनीहरुका एक छोरा छन् । शंखमूलमा उनीहरुको आफ्नै घर छ ।
सम्भवतः आज एनिभर्सरी स्टाटस लेख्दासम्म झाँक्रीले आफू पक्राउ पर्ने कुराको छनक पाइसकेकी थिइन् । उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले फोन गरेर सोधपुछका लागि डाकेका थिए । उनी चाहिं पक्राउ पुर्जी पाए मात्रै जाने अडानमा थिइन् । झाँक्री यत्तिकै उपस्थिति नहुने भएपछि महाशाखाले उनलाई पक्राउ गर्न बिहानै टोली परिचालन गर्यो ।
बिहान करिब १० बजे सादा पोशाकमा केही प्रहरी शंखमूलस्थित झाँक्री निवासमा पुगेका थिए । तर, झाँक्री बाहिर निस्किन मानिनन् । बरु उनले केही पत्रकारहरुलाई निवासभित्र बोलाएर अन्तरवार्ता दिइन् । राज्य नियमसंगत तरिकाले आए आफू गिरफ्तारी दिन तयार रहेको उनले बताइन् । pathivaradaily